China Hot kumanikidza tambo yakarukwa yemishenjere ekugadzira bhodhi Kugadzira uye Fekitori | Goridhe Bamboo
Iko pamusoro pemishenjere yakavezwa matanda ine yakasikwa yakanaka uye yakatwasuka micheka. Iyo bhodhi ine yakasikwa yemishenjere mameseji. Uye zvakare, chimiro chayo chakasiyana, uye iyo yekushongedza mhedzisiro inosiyanawo. Inofananidzwa neyakawandisa huni huni, simba remuchina rema laminated bamboo rakakwirira, uye iyo shrinkage coefficient idiki. REBO yekunze decking ine 18mm gobvu kabhoni yemishenjere, yakatodirwa mafuta uye iine mativi clip.
Strand rakarukwa yemishenjere inogadzirwa kuburikidza neakasarudzika maitiro ayo anoshandisa 100% yeMoso Bamboo, ichiita kuti iome uye igare kupfuura bamboo wenguva dzose.. it yakasimba zvakanyanya uye yakaoma kupfuura huni. Strand rakarukwa sengere ndeimwe yenzvimbo dzakaomesesa dzepasi dzinowanikwa, dzakaomarara kupfuura echinyakare hardwoods. Srand rakarukwa sengere decking uye uriri zvinopesana nemunyoro kupfuura imwe bamboo uriri nezvimwe zvinhu. REBO bamboo decking ichave yakanaka sarudzo yezvinhu kwauri.
Bamboo board ine dhayamita diki, madziro ane mhango uye rakapinza rakakura, uye kuumbwa kwayo kwakasiyana kwazvo nedanda. Iko kusimba uye kuwanda kwemishenjere kwakakwirira kupfuura kweyakajairika huni, nekudaro, simba rezvigadzirwa zvemabhodhi rakakura kudarika iro rezvinhu zvakagadzirwa nehuni. Iyo bamboo bhodhi ine yakatwasuka uye yakatsetseka machira, yakapusa ruvara, nyore kubhenekesa, dhayi uye carbonize. Bamboo inogona kugadziridzwa kuva mhinduro yakanakisa yekugadzira nzvimbo dzekunze dzakadai semadziva ekushambira, patio, nemigwagwa.
Iko pamusoro pemishenjere yakavezwa matanda ine yakasikwa yakanaka uye yakatwasuka micheka. Iyo bhodhi ine yakasikwa yemishenjere mameseji. Uye zvakare, chimiro chayo chakasiyana, uye iyo yekushongedza mhedzisiro inosiyanawo. Inofananidzwa neyakawandisa huni huni, simba remuchina rema laminated bamboo rakakwirira, uye iyo shrinkage coefficient idiki. REBO yekunze decking ine 18mm gobvu kabhoni yemishenjere, yakatodirwa mafuta uye iine mativi clip. Makona ese mana akamanikidzwa, saka zviri nyore uye wakasununguka kufamba pane bamboo pasi. Kana chingara che bamboo chavepo, bhodhi rinosara rakaparadzaniswa zvishoma kuitira kuti mvura irege kumira uye nemhepo igone kutenderera. Iyo yekunze panhivi yemushenjere ine mvere, mativi akavezwa neisina-kutsvedza kupfeka. Inogona zvakare kuiswa zvakasiyana kune mativi ese.
Zvadaro: Rima Ruvara hapana deformation yemishenjere yekucheka bhodhi
Bamboo Decking Mabhodhi
Carbonized Strand Yakarukwa Bamboo Decking Mabhodhi